Copernicus ama Aristotle ma Maamulaan Ganacsigaaga? | Martech Zone
Waxaa jira ganacsiyo dhowr ah oo aan lashaqeeyo… waxaanan filayaa kuwa aan aad ugu raaxeysto inay yihiin kuwa garwaaqsada inaysan muhiimad u laheyn sida macaamiishooda. Kuwa kale qaarkood xitaa ma qirayaan inuu jiro macmiil.
Copernicus waxaa loo aqoonsaday inuu yahay aabaha cilmiga xiddigiska casriga ah tan iyo markii uu ku dooday heliocentrism dhul ku taqasus. Si kale haddii loo dhigo, qorraxdu waxay udub dhexaad u ahayd nidaamkeenna meerayaasha, ma ahayn Dhulka. Waxay ahayd cay iyo wuxuu ka horyimid dhaqan dhan oo aqoonyahano ah oo diinta ku milmay waqtigaas. Laakiin wuu saxay.
Haddii aad rabto inaad xalliso waxyaalaha qarsoon ee ganacsigaaga, waxaad u baahan tahay inaad isweydiiso su'aalaha qaarkood marka hore oo ku saabsan sida ganacsigaagu u socdo. Inaad u aqoonsan weydo macmiilkaaga inay tahay xarunta ganacsigaaga oo aad uga muhiimsan tahay qofkasta oo ku jira waxay u horseedaa leexasho shaqaale, macaamil wareejin, aakhirkiina waxay u horseedi kartaa meheraddaadu inay baaba’do.
Natiijooyinka Sideen nahay Sidee ayay macaamiisheennu u socdaan?
isticmaalka Waxay u isticmaalayaan si qaldan. Sideen ula jaan qaadi karnaa taas?
Qiimaha Waxaan u baahanahay inaan lacag badan qaadno. Waa maxay qiimaha badeecadeenu ama adeegyadeennu u leeyihiin macaamiisheenna?
haynta Maxaad nooga tagtay? Ma waxaan sameyneynaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah inaan ku ilaalino
Partners Maxay noo qabteen? Maxaan sameyn karnaa si aan u xaqiijino guushooda?
Shaqaalaha May ahayn kuwo ku habboon. Shaqaalaheena ayaa naga dhigaya kuwo guuleysta.
miisaaniyadda Hel ogolaansho. Waa lagula xisaabtami doonaa.
Suuq- Hogaamino badan. Aqoonso rajooyinka aan hubaal ka caawin karno.
Aqoonta Hogaanka Hawshoodii kaararka deynta ma sameeyeen? Miyaynu ka dhigi doonaa kuwa guuleysta?
Dabacsanaanta Shaqaalaha Muxuu buuggu sheegayaa? Sideen u dhiirigelin karnaa una horumarin karnaa wax soo saarka?
Strategy Ma shaqeynayo Re Re-org kale! Madaxdeenu waxay soo bandhigayaan qorshahooda 5ta sano.
Features Way na soo guuriyeen! Maxaan ka shaqeyneynaa xiga?
Xiriirka Dadweynaha U fiirso. Kalsooni hel.
Hawlgelinta Bulshada Haysato IT wax walba! Ku dhiirigali shaqaalaha inay ka qayb qaataan!
Shirkad caynkee ah ayaad tahay Maalmahan warbaahinta bulshada, way fududahay in la sheego. Haddii fikraddaada ku saabsan warbaahinta bulshada ay ku faafineyso farriintaada macaamiishaada, waxaa laga yaabaa inaad maamusho Aristotle. Haddii fariintaadu ay ku dhawaaqeyso guusha macaamiishaada, waxaa maamula shirkadda Copernicus. Dunida waxay ku qaadatay 1,800+ sano si loo ogaado… waxaan rajeynayaa inaysan meheraddaadu qaadanaynin inta.
SIDA AAN LOO HELI KARIN XAALADAHA Sannadka Cusub Shaqada
30, 2009 at 7: 29 AM
Isbarbardhiga xariifka ah, Doug. Markii la sii waday isbarbardhiga, Henry Ford wuxuu bilaabay sidii Copernicus wuxuuna noqday Aristotle in mudo ah, aakhirkiina waxaa lagu qasbay inuu dib ugu laabto xaqiiqada ganacsiga adduunka ee Copernican. Si ka duwan qarnigii 14aad, kuwa raacaya habka aan macaamil-ku-saleysnayn ee ganacsiga looma kala jajaban yahay & baalal u leh waxa ay aaminsan yihiin. Way kacaan ama waa la dacweeyaa.